Mac ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုမည်သို့ပြန်ထားရမည်နည်း။ Emulator.online ▷🥇
Apple Macs နှင့် MacBooks များသည်ရုံးခန်း (သို့) စားပွဲခုံပေါ်တွင်ကြည့်။ နေရာချရန်အလွန်တကယ့်ကိုလှပသောကွန်ပျူတာများဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏လှပမှုနှင့်ပြည့်စုံမှုတို့မှာသူတို့သည်ကွန်ပျူတာများဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်၍ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အလုပ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ပြီးဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများရှိနိုင်သည်။ ဖြေရှင်းရန်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းရိုးရှင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိပါက၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသည်မှန်ကန်စွာဖွင့်မရပါ၊ သို့မဟုတ်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ VoIP သို့မဟုတ် video conferencing applications များ) သည်သူတို့လုပ်သင့်သည်အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ပါကသင့်လျော်သောလမ်းညွှန်ကိုရောက်သည်။ ဒီမှာတကယ်တော့ငါတို့ဟာအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့သုံးစွဲသူအတွက်တောင်မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည် Mac တွင်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုပြန်ထားပါဒါကြောင့်ပြyouနာမဖြစ်မှီသင်တွေ့ခဲ့တဲ့ download and upload speed ကိုပြန်သွားနိုင်ပြီးဘာမှမဖြစ်သကဲ့သို့သင်၏ Mac ကိုအလုပ်ပြန်လုပ်ပြီးလေ့လာပါ။
အဖတ်ကိုလည်း: router နှင့် wifi connection ပြproblemsနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်
Mac connection ကိုဘယ်လိုပြန်ထားမလဲ
Mac ပေါ်ရှိ connection ကိုပြန်လည်ရယူရန် macOS operating system တွင်ရှိနေသောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုချက်ချင်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူ၏လှည့်ကွက်အချို့ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာအင်တာနက် connection သည်ကျွန်ုပ်တို့ Mac ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ခဲ့သကဲ့သို့ပြန်လည်အလုပ်လုပ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်မိပါကဆက်သွယ်မှုပြသနာဖြစ်ပွားပါကထိုကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်သည် ကြိုးမဲ့ရောဂါ Apple ကသူ့ဟာသူထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းကိုသုံးရန်သင့်အားဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာအောင်ဖိ။ ကိုင်ထားပါ Option (Alt)အပေါ်ညာဘက်ရှိ Wi-Fi အခြေအနေမီနူးသို့သွားပြီးနှိပ်ပါ ကြိုးမဲ့ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုဖွင့်ပါ.
ကျနော်တို့ administrator အကောင့်၏အထောက်အထားများကိုရိုက်ထည့်ပါ, ပြီးတော့ကျနော်တို့က၎င်း၏စစ်ဆေးမှုများထွက်သယ်ဆောင်ရန် tool ကိုစောင့်ဆိုင်း။ ရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုသည်လိုက်နာရန်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်ချိတ်ဆက်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန် Mac မှလုပ်ဆောင်သောစစ်ဆင်ရေး၏အကျဉ်းချုပ် ၀ င်းဒိုးပေါ်လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပြtheနာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြisနာဖြစ်လျှင် (လိုင်းပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ) အောက်ပါနှင့်ဆင်တူသည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာနိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်အသံကိုဖွင့်ရန်အကြံပြုလိုသည် သင်၏ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ပါ၊ Mac သို့ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း၏အလုပ်ကိုစွန့်ခွာရန်၊ အကယ်၍ ပြofနာများရှိပါကကြား ၀ င်နိုင်သည်။ ဆောင်းပါးဖွင့်လှစ် အကျဉ်းချုပ်သွားပါ ၎င်းအစားကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်လျှောက်ထားရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပါမည်။
DNS သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်အရေးကြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုင်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး modem နှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်ပင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်လုံလောက်သောချို့ယွင်းချက်ကိုပြသသည် (ဥပမာ - အော်ပရေတာ၏ DNS ကိုမီးပျက်နေသောကြောင့်) အချိန်တိုင်းဆက်သွယ်မှု။ ဝဘ်ဆိုက်။
ပြtheနာသည် DNS နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်မီနူးကိုဖွင့်ပါ ဝိုင်ဖိုင် O Ethernet အပေါ်ညာဘက်ရှိပစ္စည်းကိုနှိပ်ပါ ကွန်ယက်အကြိုက်များကိုဖွင့်ပါ, ယခုအချိန်တွင်တက်ကြွသော connection သို့သွားကြကုန်အံ့, Advanced အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနောက်ဆုံးတွင်မျက်နှာပြင်ကိုသွား DNS ကို.
အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ modem (သို့) router ၏ IP address ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အောက်ခြေရှိ + icon ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် 8.8.8.8 (Google DNS, အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေပါပြီ) ကိုရိုက်ခြင်းဖြင့် DNS server အသစ်တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် DNS server အဟောင်းကို ဖျက်၍ အောက်ခြေတွင်နှိပ်ပါ အိုကေကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောဆာဗာကိုသာအသုံးပြုရန်။ ပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်ကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်သည် DNS ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ.
Wireless Diagnosis နှင့် DNS ပြောင်းလဲမှုတို့သည် connection ပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကလက်ရှိအသုံးပြုနေသော Wi-Fi ကွန်ယက်သို့ထပ်မံ ၀ င်ရောက်မှုကိုထပ်တလဲလဲနိုင်ရန်စနစ်အတွင်းရှိကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုများကိုဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လက်ရှိတက်ကြွနေသော Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ထားပါ (ညာဘက်အထက် Wi-Fi menu မှ) Finder ကိုအောက်ခြေရှိ Dock bar တွင်ဖွင့်ပြီးမီနူးသို့သွားပါ Oငါတို့ဖွင့်တော့မယ် ဖိုင်တွဲကိုသွား အောက်ပါလမ်းကြောင်းကိုရေးပါ။
/ စာကြည့်တိုက် / ဦး စားပေး / စနစ်ချိန်ညှိ
ဤဖိုင်တွဲဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ အောက်ပါဖိုင်များကို Mac recycle bin သို့ရွှေ့ပါသို့မဟုတ်ရွှေ့ပါ။
ဖိုင်များအားလုံးကိုဖျက်ပြီး၊ ပြောင်းလဲမှုများအကျိုးသက်ရောက်ရန် Mac ကို restart လုပ်ပါ။ reboot လုပ်ပြီးရင် Wi-Fi network ကိုဆက်သွယ်ပြီး connection ချောချောမွေ့မွေ့ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မဖြေရှင်းနိုင်ပါကနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Mac ကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်း modem / router သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသော connection အမျိုးအစားတို့ပါဝင်နိုင်သည့်ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အောက်ပါစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုချက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သည်။
modem ကို restart လုပ်ရအောင်- ဤအရာသည်အရိုးရှင်းဆုံးအကြံပေးချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပြသနာကိုသေချာပေါက်ဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်တူညီသောကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအခြားစက်ပစ္စည်းများသည်လည်း Mac နှင့်အလားတူပြifနာများရှိလျှင်။ ပြန်လည်စတင်ခြင်းကသင့်အားအခြားမည်သည့်အရာမှမလုပ်ပဲအမြန်ဆုံးပြန်ထားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်5GHz Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုသည်- ခေတ်သစ် Mac အားလုံးတွင် dual band connection ရှိသည်။ 5GHz band ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခြင်းသည်အနီးအနားရှိကွန်ယက်များနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုနည်းပြီးမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် 2,4 GHz နှင့်5GHz Wi-Fi ကွန်ရက်များအကြားခြားနားချက်များ; ဘာကောင်းလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Ethernet connection ကိုအသုံးပြုသည်။ ပြquickနာရှိမရှိနားလည်ရန်အခြားမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်ရှည်လျားသော Ethernet cable ကိုအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့်သင်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများမှပင် Mac ကို modem နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအလုပ်လုပ်ပါကပြနာသည် Mac ၏ Wi-Fi module (သို့) လမ်းညွှန်တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း modem ၏ Wi-Fi module တစ်ခုဖြစ်သည်။ router နှင့် wifi connection ပြproblemsနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်.
ကျနော်တို့ Range Extender သို့မဟုတ် Powerline ဖယ်ရှားပစ်ဖြေ - Mac ကို Wi-Fi Extender (သို့) Powerline ကတဆင့်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ modem network ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် Ethernet cable ကိုသုံးဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဤကိရိယာများသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအပူလွန်ကဲပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှား။ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည်အထိသင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
ဒီလမ်းညွှန်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြံပြုချက်တွေအားလုံးကိုအသုံးပြုပြီး Mac ဆက်သွယ်ရေးပြproblemsနာအများစုကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်စရာမလိုဘဲအခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမဖွင့်ဘဲရှုပ်ထွေးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကြားမှာရူးသွပ်နေလိမ့်မယ်။ ဝဘ်။
လမ်းညွှန်မှအကြံဥာဏ်များကြားမှကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုသည် Mac ပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါကကိုယ်ပိုင်ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစတင်ရန်ဘာမှမကျန်တော့ပါ။ USB ပြင်ပ drive; ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ပါ Mac ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ, macOS ပြproblemsနာများနှင့်အမှားများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံ mi သင်၏ Mac ကို restart လုပ်ရန်နှင့်သင့်တော်သော startup ကိုပြန်ယူရန်နည်းလမ်း ၉ ခု.
Huawei ဖုန်း Clone သည်အချက်အလက်နှင့်ဖိုင်များကိုစမတ်ဖုန်းအသစ်သို့လွှဲပြောင်းပေးသည်
Display နှစ်ခု (HDMI switcher) နှင့်အတူ PC နှစ်ခုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
မြန်ဆန်သောအင်တာနက်အတွက်ဖိုင်ဘာအစားထိုး FWA ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Android Wi-Fi သည်ကွန်ယက်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ကိုမချိတ်ဆက်ပါကအဖြေ
Fire TV Stick တွင် DNS ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
LAN ကိုဖန်တီးရန်အွန်လိုင်းကစားရန် VPN ကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးပါ
ပုံမှန်စကားဝှက်နှင့် routers အားလုံးအတွက် login
ဆက်သွယ်မှု ports ကိုဖွင့်ရန် router တွင် port forwarding ကိုအလွယ်တကူ configure လုပ်ပါ
iPhone / iPad မှကွန်ပျူတာသို့အဝေးမှ Desktop ဆက်သွယ်မှု